Bare Hiiraale “Waxaan Ahay Madaxweynaha Jubaland, Shir kismayo ka socday Ayaa leygu doortay” – SBC
Bare Hiiraale “Waxaan Ahay Madaxweynaha Jubaland, Shir kismayo ka socday Ayaa leygu doortay”
Posted by Webmaster on May 15, 2013 Comments
Bari Aadan Shire Hiiraale oo ka mid ah Siyaasiyiinta ku suga Magaalada Kismaayo xarunta gObolka Jubada hoose ayaa ku dhawaaqay in uu yahay Madaxweynaha maamulka goboleedka Jubaland laguna doortay shir ka soconayay magaalada Kismaayo.
Bare Hiiraale ayaa intaasi ku daray in Shirka lagu doortay uu ahaa mid ay qabsadeen shacabka Soomaaliyeed, isagoona ku tilmaamay shirkii kale ee ka socday Kismaayo islamarkaana lagu doortay Axmed Madoobe mid aan aheyn mid Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabiyeen Igad.
Waxa uu intaasi ku daray Bare Hiiraale in uu isagu yahay madaxweynaha xaqa ah ee dowlad goboleedka Jubaland lana weydiinayo shacabka Soomaaliyeed .
Maanta gelinkii hore Doorasho ka bilaabatay Howlka shirarka Jaamacada Kismaayo waxaa loogu doortay Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Waxaana shirkaasi lagu doortay ahaa mid mudooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay Magaalada Kismaayo.
Bare Aadan Shire Hiiraale hadalkan ka soo yeeray ee sheegashada in uu yahay madaxweyne loona doortay ayaa waxa uu imanayaa xili Shacabka Puntland iyo kuwa Jubaland ay si diiran u soo dhaweeyeen Doorashada Axmed Madoobe.